Inona ny tendrombohitra avo indrindra eto an-tany? Lazainay aminao ny zava-drehetra | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 12/02/2021 16:00 | Haibolantany
Rehefa miresaka momba ny tendrombohitra avo indrindra eto an-tany matetika isika no mieritreritra ny tendrombohitra Everest. Misy fomba samihafa handrefesana ny hahavon'ny tendrombohitra ary ekipa mpanao fandrefesana no nanapa-kevitra ny handrefy ny haavon'ny tampon'ny tendrombohitra himalayan range. Nanjary liana tamin'ny tendrombohitra iray mihoatra ny hafa rehetra izy ireo. Io no XV voalohany.
Ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny tendrombohitra avo indrindra eto an-tany ary ho hitantsika raha Everest no tendrombohitra avo indrindra eto an-tany.
1 Tendrombohitra avo indrindra eto an-tany
2 Fomba fandrefesana tendrombohitra
3 Fananganana ny tendrombohitra avo indrindra eran'izao tontolo izao
4 Tendrombohitra taloha
Fony zanatany anglisy i India dia nanomboka nandrefy ny haavon'ny tampon'ny tampon'ny Himalaya ny ekipa mpanadihady iray. Nikajiana ny haavon'ny 9.000 metatra ambonin'ny haabon'ny Summit XV izy ireo. Izany no nahatonga azy ho tendrombohitra avo indrindra eran-tany. Tamin'ny 1865, dia novain'izy ireo hoe Everest ny anaran'io zanak'olo-mpiray tam-po io. Ity anarana ity dia avy amin'i George Everest, manam-pahaizana Welsh izay niandraikitra ny fandrefesana saika ny topografia manontolo an'i India. Hatramin'io taona io dia be dia be ny mpihanika no nanandrana naka ny tampon'ny tampony hanehoana amin'izao tontolo izao fa nanitsaka ny tendrombohitra avo indrindra eran'izao tontolo izao izy ireo.
Fantatsika ny karazan-tantara rehetra izay mbola tsy nisy famaranana tsara. Ary ny tongotray amin'ireo havoana ireo amin'ny alàlan'ny tongotsika manokana dia mety hitera-doza lehibe. Avy amin'ny haavo iray hafa, ny toe-piainana dia tsy ahafahan'ny olombelona mijanona maharitra. Mihena ny haavon'ny tsindry ary mihena koa ny mari-pana. Raha vitsy ny zavamaniry, mihena ny tsindry ary mihena ny oxygen, sarotra ny mijanona amin'ny avo. Ampiarahintsika amin'izany ny fahasahiranan'ny haavon'ny hantsana izay ananan'ny tendrombohitra rehefa mihabe ny haavontsika.
Ireo antony rehetra ireo dia mifangaro tanteraka amin'ny lozam-pifamoivoizana maro be izay nisy nandritra ny tantaran'ireo izay nanandrana nananika ny tendrombohitra avo indrindra eto an-tany.
Fomba fandrefesana tendrombohitra
Raha mandrefy ny Everest amin'ny haavon'ny ranomasina isika dia hitantsika fa io no tendrombohitra avo indrindra eto an-tany. Na izany aza, misy tendrombohitra hafa avo kokoa noho ity iray ity raha mbola mampiasa masontsivana hafa isika hikajiana ny hahavony. Fantatray fa ny fomba fandrefesana rehetra dia miankina amin'ny fijerin'ny mpandinika. Lafin-javatra iray hafa tokony hikajiana amin'ny fomba fandrefesana rehetra ny teboka firesahana izay safidintsika.
Raha mampiasa ny loharanom-pahalalana avy amin'ny fototra iorenan'ireto tendrombohitra ireto isika, hitantsika fa ny Kilimanjaro any Tanzania sy ny volkano Mauna Kea ary Hawaii dia avo kokoa noho i Everest. Araka ny hitanao, miankina amin'ny teboka ampiasainay handrefesana ny halavany dia hitantsika fa tsy ilay tendrombohitra avo indrindra eto an-tany. Ara-dalàna kokoa raha manatona ny teboka fanovozana avy amin'ny fotony ipetrahan'ny tendrombohitra toy izay maka ny haavon'ny haavon'ny ranomasina ho toy ny teboka voatondro.
Ny tendrombohitra Kilimanjaro dia mipetraka eo amin'ny lemaka afrikanina izay akaikin'ny haavon'ny ranomasina. Raha mandrefy ity tendrombohitra ity isika amin'ny fototra dia hitantsika fa avo kokoa noho i Everest izy io. Etsy ankilany, raha mandinika ny Mauna Kea isika dia mahita fa avo kokoa noho izany aza. Ary izy io dia manana ny fotony ao amin'ny fanambanin'ny ranomasina. Amin'ny maha volkano antsika dia hitantsika fa lalina kokoa ambonin'ny haavon'ny ranomasina ny fotony. Raha mbola mamakafaka ny haavon'ny haavon'ny tendrombohitra isika, ny avo indrindra dia ny Mauna Kea.
Fananganana ny tendrombohitra avo indrindra eran'izao tontolo izao
Raha mandray ny haavon'ny ranomasina ho teboka iray isika, Everest no tendrombohitra avo indrindra manerantany. Ary io no izy, ny tsiambaratelon'ny haavon'ny Everest dia tsy ao amin'ny tampony raha tsy any ambanin'ny tany. Ny fomba namoronana ity tendrombohitra ity dia ny fomba nahafahany nanorim-ponenana teny amin'ny toerana avo toy izany. 50 tapitrisa taona lasa izay dia nifandona tamin'ny kaontinanta Aziatika ny takelaka kontinanta India. Hatramin'ny tantaran'ny tany manontolo dia io no fifandonana lehibe indrindra tao anatin'ny 400 tapitrisa taona. Nahery setra tokoa ny fifandonana toy izany ka tsy vongana fotsiny ilay takelaka Indiana, fa nitsoaka tany ambanin'ny kaontinanta Aziatika koa. Amin'izany fomba izany, ity takelaka ity, izay mamakivaky ny kaontinanta, dia nampiakatra ny velaran-tany ho any an-danitra, namorona an'i Everest.
Na dia nifandona erak'izao tontolo izao aza ny takelaka tektonika dia niavaka ny zava-nitranga teo ambanin'i Everest. Noho io antony io, ity tendrombohitra ity no hany tendrombohitra avo indrindra eto an-tany rehefa very avy amin'ny haabon'ny ranomasina.
Mbola tanora ihany ny tandavan-tendrombohitra Himalaya raha vao 50 tapitrisa taona monja. Rehefa manosika ny takelaka Indiana avaratra sy ambanin'i Azia ireo takelaka, dia mitohy miakatra ireo tendrombohitra Himalaya. Amin'izao fotoana izao, ny hery manosika mankany ambony dia lehibe kokoa noho ny vokatry ny fikaohon-tany. Araka ny fantatsika, ny fikaohon-tany vokatry ny rano sy ny rivotra, ankoatry ny mpandraharaha ara-jeolojia hafa manomboka mampihena ny haavon'ny tampon'isa avoakan'izy ireo. Ny iray amin'ireo fomba handrefesana ny taonan'ny tendrombohitra dia ny fahitana ny ambaratongan'ny fiheveran-diso sy fahasimbana iharan'ny tampon'ny tampony.
Ny ankamaroan'ny mpihanika izay miakatra an-tampon'ny Everest dia manao izany mba hanehoana am-pireharehana fa mahavita mihanika ny tendrombohitra avo indrindra eto an-tany izy ireo. Na eo aza izany dia mitombo hatrany io tendrombohitra io ankehitriny. Ny faritra ambany amin'ny tendrombohitra dia vita amin'ny granite, iray amin'ireo vato matanjaka indrindra eto an-tany. Noho io fitambarana io dia avelan'izy ireo hahatohitra tsara ny fikaohon-tany noho ny tendrombohitra hafa izay tsy dia mafy loatra.
Taorian'ny horohorontany farany tany Nepal, ny tendrombohitra rehetra avaratry Kathmandu nitsangana tokony ho iray metatra izy ireo. Noho izany, Everest dia mety nidina somary. Ity bitika ity dia azo tsinontsinoavina tanteraka amin'ny haavony manontolo. Ny tahan'ny fikaohon-tany dia amin'ny fotoana iray na amin'ny fitomboana ateraky ny fanosehana ireo takelaka. Na dia mbola an-tapitrisany taona aza ny hanaovana izany, dia ho very ny anaram-boninahitra hoe tendrombohitra avo indrindra eto an-tany i Everest.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Tendrombohitra avo indrindra eto an-tany